Ithegi: uthethathethwano lokuthengisa | Martech Zone
Ithegi: uthethathethwano lokuthengisa
Ekuqaleni kobhubhane, iinkampani ezininzi zisika uhlahlo-lwabiwo mali lwentengiso kunye nentengiso ngenxa yokwehla kwengeniso. Amanye amashishini acinga ukuba ngenxa yokuyekiswa kwabantu abaninzi, abathengi bayayeka ukuchitha ukuze uhlahlo-lwabiwo mali nentengiso zincitshiswe. Ezi nkampani zazingela phantsi ukuphendula ubunzima bezoqoqosho. Ukongeza kwiinkampani ezithandabuzayo ukuqhubeka okanye ukumilisela amaphulo amatsha entengiso, izikhululo zikamabonwakude nezikanomathotholo nazo bezisokola ukuzisa nokugcina abathengi. Iiarhente kunye nentengiso